Xaalada xabsiga Muqdisho - BBC Somali - Warar
Xaalada xabsiga Muqdisho
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Maarso, 2013, 17:17 GMT 20:17 SGA
Raiisal wasaare Cabdi Faarax Shirdoon
Xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ay dhawaantan labo maxbuus ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka, ayaa waxaa maanta tagay Raiisalwasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo ay wehliyaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa.
Xabsiga oo ay ku jiraan in kabadan kun maxbuus, ayaa indhaha warbaahinta waxa uu soo jiitay markii todobaadkii hore saraakiisha xabsigu shaaciyeen jiritaanka cudurka shubanka, iyo tirada badan ee uu soo ritay taasoo keentay in hay'adaha caafimaadku ay dawooyin gaarsiiyaan xabsiga.
Wasiirka koowaad Cabdi Faarax Shirdoon oo ay wehliyeen Wasiirka Cadaalada iyo kan Warfaafinta, ayaa hadal uu ka jeediyay xabsiga dhexe waxa uu sheegay inay xaalad adag ka jirto halkaasi isla markaana uu indhihiisa kusoo arkay. Ra'iisalwasaare Saacid, waxa uu sheegay inay si deg deg ah wax uga qaban doonaan xaaladda maxaabiista.
Cudurka shuban biyoodka ayaa xiliyada kulaylaha lagu arkaa dalka Soomaaliya, iyadoo kiisas cudurka ah laga soo warinayo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne.
Afrika Qarax ka dhacay Aljeeriya
Germalka oo qaadatay koobka adduunka